एक स्नान कसरी चयन गर्न, यो शरीर र प्राण आराम गर्न एक ठाउँ बनाउन? वरिपरि रोशन मोमबत्ती र सुखद संगीत संग एक तातो स्नान मा भिजेको गर्न प्रलोभनको प्रतिरोध गर्न सक्छौं केही। तपाईं धेरै वर्षसम्म रहन्छ भनेर एक स्नान कसरी चयन गर्न सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो उपस्थिति र आकार लागि सही छ, र उनको ल्याए कुनै परेशानी हेरचाह, त्यसपछि यो लेख तपाईं को लागि हो।
तपाईं एक स्नान लागि जाने अघि, यसलाई गर्नुपर्छ जो को आकार र सामाग्री निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
छनौट स्नान: कच्चा फलाम, इस्पात वा एक्रिलिक
कम्तिमा पन्ध्र वर्ष को अवधि स्नान जीवन, त्यसैले विकल्प ठूलो जिम्मेवारी नजिक हुनुपर्छ।
सबै भन्दा साधारण स्नान - डाली-फलाम। बलियो, स्थिर र टिकाउ, तर यो धेरै भारी (≈ 120 किलो) हो, त्यसैले माथिल्लो फर्श मा यातायात र स्थापना अपार्टमेन्ट भवन को पैसा को धेरै उठ्नेछ। अब पानी तापमान कायम लागि उच्च गर्मी क्षमता अनुमति दिन्छ। कास्ट-फलाम स्नान को कमजोर बिन्दु तामचीनी सकिन्छ। यसको चमक को एक्रिलिक bathtubs को भन्दा बढी तीव्र, तर यो स्नान मा एक भारी वस्तु गिर, क्षति गर्न सजिलो छ। गलत हेरविचार तामचीनी पहेंलो बारी वा दरार सक्छ। यो पूर्ण जोडतोडले तामचीनी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। इच्छित भने, यो Tinted गर्न सकिन्छ, तर मुख्य रूप सेतो स्नान बेचे। कास्ट-फलाम स्नान को आकार कारण आफ्नो निर्माण प्रक्रिया को जटिलता मात्र आयताकार छन्।
हाल को वर्ष मा कुनै कम लोकप्रिय एक्रिलिक bathtubs। एक स्नान कसरी चयन गर्न एक्रिलिक को? यहाँ, सबै भन्दा मांग ग्राहक को इच्छा पूरा गर्न आकारहरू र रंग को एक किसिम। एक्रिलिक - यो नै प्लास्टिक छ तर स्नान आफ्नो वजन र पानी मा विकृत छैन भनेर प्रबलित। अपेक्षाकृत कम वजन, आकार, रंग, उच्च गर्मी, फलाम डाली स्नान भन्दा पानी तापमान अब राख्छ जो एक किसिम। गुणस्तर एक्रिलिक टब को सुदृढीकरण सामाग्री मा निर्भर गर्दछ: एक धातु जाल (प्राथमिकताको) वा फाइबर सिसा। एक्रिलिक स्नान सफा गर्न सजिलो र स्वच्छ छ।
अर्थव्यवस्था वर्ग को एक स्नान कसरी चयन गर्ने? सबैभन्दा बजेट संस्करण - एक इस्पात टब। 30 किलो, प्रकारका एक किसिम, तर बारेमा वजन स्नान बल एक्रिलिक bathtubs मा उच्च हो, तामचीनी कोटिंग फलाम टब डाली छैन कमसल छ। त्यहाँ केही कमियां हो: चाँडै इस्पात को उच्च गर्मी कारण पानी तापमान खस्छ; पानी टब पर्खाल एक जेट मार गर्दा चर्को घन्टी। हल्ला कमी विशेष रबर पैड स्थापना गरिनु पर्दछ सुधार गर्न।
भौतिक अलग्गै, यो इच्छित थाहा आवश्यक छ स्नान आकार। सामान्यतया, त्यहाँ एक मानक आकार (एल × डब्ल्यू × बी सेमी) 150/170/180 × 70/80/85 × 65 छ। तपाईं reclined स्थिति मा स्नान मा हुन सहज हुनुपर्छ, त्यसैले चौडाई तपाईं कम्तिमा5सेमी को पक्ष मा ठाउँ खाली छोड्न हुँदैन। एक परिवार पुरानो वा वजन भएको मान्छे छ भने, यो हात नभएको खण्डमा वा Handrails एक स्नान चयन गर्न राम्रो छ।
स्नान - मन र शरीर को शुद्धता को Abode
यसलाई राम्ररी बाथरूम हेरचाह गर्न महत्त्वपूर्ण छ। खियाले वा कागती एक स्नान कसरी सफा गर्ने? को टब को निर्माण को सामाग्री को बिना संक्षारक पदार्थ संग स्नान पाउडर क्लीनर सफाई गर्दा प्रयोग गर्न सकिँदैन: तिनीहरूले तामचीनी कोटिंग स्नान बिगार्छ र चमक हराउछ। कुनै पनि सामाग्री को स्नान को डिटर्जेंट संरचना मात्र शामिल गर्नुपर्छ सतह सक्रिय पदार्थ (surfactants)। यो धेरै वर्ष को लागि तामचीनी चमक राख्नेछ। तिनीहरूले गरिबी सतह देखि टाढा धोए रूपमा, क्लोरिन आधारित सफाई एजेन्ट प्रयोग नगर्नुहोस्, राम्रो, गन्ध धेरै पन्जेन्ट छ। को निस्संक्रामक सिरका समाधान जो जीवाणु मार्न र तामचीनी स्नान हानि छैन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। हरेक निर्णय पछि नियमित रूपमा बाथरूम लागि राम्रो हेरविचार, एक सामान्य सफाई को लागि कुनै आवश्यकता हुनेछ।
रेखाचित्र र चित्रकला लागि टेबल।
Tsarevich Alexei को मामला। Alexei Petrovich Romanov: सिंहासन को इन्कार
मेष मानिस: यो जीत कसरी र उसलाई विवाह गर्न
चकलेट cupcakes। पकाउने व्यञ्जनहरु
चिकित्सा "Phenylephrine Hydrochloride": प्रयोगको लागि निर्देशन